आखिर किन बनेन ३ वर्षसम्म पनि रूपगाढकाे पुल ? ठेकेदारलाइ कारबाहि गर्ने नगर प्रमुखकाे चेतावनी ! - imandarkhabar
आखिर किन बनेन ३ वर्षसम्म पनि रूपगाढकाे पुल ? ठेकेदारलाइ कारबाहि गर्ने नगर प्रमुखकाे चेतावनी !
याे खाेलाकाे नाम हाे रूपगाड । रूपगाड खाेलामाथि दुइ वटा पुल छन्,एक काठेपुल छ,सबैले प्रयाेग गर्ने,अर्काे वर्षाै देखि बन्दै गरेकाे पक्कि पुल छ । याे बाटाे भएर हिड्ने धेरै सर्वसाधरणलाइ लाग्छ पुल बन्दै छ,अव त पक्कि पुलमा हिड्न पाइने भयाे । तर वास्तविकता बुज्नेले भने वर्षाै देखि आधा बन्दै गरेकाे पुल मात्र देखेका छन् । ३ वर्षसम्म पुलकाे आदि ढलान भएकाे छ,फलामका सरीया तेर्स्याइएकाे छ,काम ठप्प छ ।
याे पुल बन्न लागेकाे स्थान डाेल्पा जिल्लाकाे ठुलीभेरी नगरपालिकाकाे केन्द्र जुफाल नजिकै पर्छ । याे बाटाे भएर हिड्ने सर्वसाधरण देखि सबैलाइ लाग्ने गर्छ आखिर याे पुल किन बनेन ? सर्वसाधरण भन्छन् ठेकेदारकाे मनपरि छ,जे गरे पनि हुन्छ । भन्ने केहि कुरा छन्,आक्राेस छ तर भन्ने ठाउँ छैन आक्राेस पाेख्ने त कसलाइ पाेख्ने ? तर याे पुलकाे वास्तविकता अर्कै छ ।
आखिर किन बनेन ३ वर्षसम्म पनि याे पुल ?
इमान्दार खवरलाइ प्राप्त डकुमेन्टलाइ आधार मान्ने हाे भने रूपगाड खाेलामा आरसीसी ढलान सहितकाे पक्कि पुलकाे ठेक्का वि.स २०७४ सालमा याे पुलकाे ठेक्का भ्याट सहित करिव ३ कराेडमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत खुलेकाे थियाे । उक्त पुल निर्माणकाे जिम्मा मृत सञ्जिवनी निमार्ण कम्पनिले पायाे । त्यसपछि सञ्जिवनी कम्पनिका डाेल्पा प्रतिनिधि हिम बुढाले काम शुरू गरे । तर काम शुरू हुनासाथ मुआब्जाकाे बिवाद भयाे । हिम बुढाका बिजनेश पाट्नर ओम राेका तरालीले काम गराइ रहेका थिए । ठेकेदार तरालीका अनुसार हामिले काम २०७४ असार १ गते देखि काम शुरू गरेका थियाैँ तर निर्माणकाे शुरूमै मुआब्जा विवाद भयाे । बर्खा याममा निर्माण सामग्रीकाे पनि अभाव र बर्खायाममा खाेला बढेकाले काम राेकिएकाे तराली बताउँछन् । काममा विभिन्न बाधा आएपछि उनले काम बिचैमा छाेडेकाे दावी गर्छन् । त्यसपछि हिम बुढाले नै काम गरे । तर पुल निर्माणले पूर्णता पाउँन सकेन ।
बैना लगेर ठेकेदारले काम गरेनन्ःशेरबहादुर बुढा,प्रमुख जिल्ला समन्वय समिति डाेल्पा
जिल्ला समन्वय समिति डाेल्पाका प्रमुख शेरबहादुर बुढा रूपगाडकाे पुल निर्माणकाे लागि धेरै चासाे पहल भएकाे दावी गर्नछन् । रूपगाडकाे माेटरेबल पुल निर्माणकाे डिजाइन सर्भे देखि ठेकेदारले पेस्की रकम लिएकाे पनि बुढा बताउँछन् । पुल बन्नुकाे मुख्य कारण जिल्ला प्राविधिक कार्यालय हट्नु भएकाे बुढाकाे दावी छ । उक्त कार्यालय मार्फत भएकाे काम कार्यालय नै हटेपछि अलपत्र परेकाे उनकाे बुझाइ छ । मुलुक संघियतामा गएर प्रदेशहरू बनेपछि मुलुकभर जिल्ला प्राविधिक कार्यलय हटाइएकाे थियाे ।
प्राविधिक कार्यालय हटेकाे निहुमा पन्छिन खाेज्दैछन् ठेकेदार
रूपगाडकाे पुल निर्माणकाे जिम्मा पाएकाे, मृत सञ्जिवनी निमार्ण कम्पनिका डाेल्पा प्रतिनिधि ठेकेदार हिम बुढा भने जिल्ला प्राविधिक कार्यालय हटेपछि काम अलपत्र परेकाे बताउँछन् । कार्यालय हटेपछि काम भएकाे छ तर कतिकाे काम भयाे भन्ने थाहाँ पाउन समेत मुस्किल परेकाे दावी गर्छन् । काम अनुसारकाे पैसा आफुले पाएकाे तर कति पैसा लिएकाे भन्ने एकिन नभएकाे उनि बताउँछन् । ठेकेदार हिम बुढाका अनुसार मुआब्जा लगाएतका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेका छन् । अव प्रदेश सरकारले भाैतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत बजेट ओएपछि र जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि आएकाेले काम चाँडै शुरू भएर पुल निर्माण चाँडै हुने उनकाे दावी छ ।
पूर्वाधार विकार कार्यलय डाेल्पाका प्रमुख याेगेन्द्र धरलाका अनुसार उक्त पुल निर्माणकाे फाइल समन्वयबाट आएकाे छैन । फाइल हस्तान्तरण भएपछि काम अगाडि बढ्ने उनकाे दावी छ ।
ठेकेदारलाइ कानुनी कारबाहि गर्ने नगर प्रमुखकाे चेतावनी
रूपगाड पुलकाे विषयलाइ लिएर ठुलीभेरी नगरपालिकाकाे केन्द्र जुफालमा पनि चर्चा परिचर्चा हुने गरेकाे छ । नगर प्रमुख गणेश शाहिका अनुसार काम वर्षाैँ देखि अलपत्र परेकाे र जनताले सास्ती खेप्नु परेकाे भन्दै ठेक्वा लगाउने र ठेक्का लिएर काम नगर्ने दुवै विरूद्द नगर कानुनी कारबाहिकाे बाटाे राेज्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । तर नगरले पनि पुल निर्माण त गर्नसक्थ्याे किन गर्न सकेन ? भन्ने प्रश्नमा मेयर शाहिले नेपाल सरककार मार्फत कुनै एक कार्यालय मार्फत भएका काम हामिले गर्दा दाेहाेराे याेजना हाल्न नमिल्ने भएकाले पुल निर्माण गर्न नसकिएकाे बताउँछन् । काठेपुल बनाएरै भएपनि काम चलाउ बनाएकाे तर पक्कि पुलमा दाेहाेराे याेजना हुने भएकाले नगरले केहि गर्न नसकेकाे दावी गर्छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पटक पटक पहल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाे मेयर शाहिकाे गुनासाे छ । आगामि दिनमा पनि पहल जारी राख्ने मेयर शाहिले बताए ।
डाेल्पाली जनता भने कहिले पुल बन्ना र ढुक्कले खाेला तर्न पाइएला भन्ने आशामा बसेका छन् ।
Previous articleकांग्रेस प्रवेश लगत्तै नेता कर्ण बुढाकाे खुलाशा,आउँदाे चुनावमा डोल्पामा कांग्रेसको जित हुन्छ ।
Next articleप्रधानमन्त्री ओलीले दिए भारतलाइ काउन्टर रामको जन्मभूमि माडी भएकाे भन्दै,भब्य मन्दिर बनाउन निर्देशन